केकी अधिकारी कसलाई कुरेर बसिन् बाटोमा ? (भिडियो) – Fewa Times
केकी अधिकारी कसलाई कुरेर बसिन् बाटोमा ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति: October 4, 2019 5:19 pm
काठमाडौँ – नेपाली सिने उद्योगमा चलेकी अ‍ेभिनेत्री हुन्– केकी अधिकारी । जीवन्त अभिनय गर्ने केकी अधिकारी यतिबेला भने आफ्नो मान्छेको पर्खाइमा थाकेर रुँदै गरेकी भेटिएकी छिन् । आफूले माया गरेको मान्छेको पर्खाइमा रुँदै गरेको केकी अधिकारीको यो भावुक दृष्य गायिका दुर्गा खरेलको पछिल्लो गीतको म्यूजिक भिडियोका लागि कैद गरिएको हो । गीतको म्यूजिक भिडियोमा अभिनेत्री केकीलाई पवन शर्माले अभिनयमा साथ दिएका छन् ।